Tra-tehaka ny lehilahy iray, atidohan’ny famotsiana omby sy fanaovana taratasy hosoka.
Loharanom-baovao azo avy amin'ny olona tsara sitrapo no nijokoana azy tao Soavinandriana Itasy ny 07 septambra lasa teo, rehefa nanaovan’ny zandary velapandrika.
Mampiasa taratasin'omby ara-panjakana hosoka miisa telo izy ary ampiasainy izany isaky ny tsenan'omby ao an-toerana.
Rahefa natao ny fisavana ny tranony tany Morarivo Mananasy, sy ny fivantanany tao Soavinandriana, dia nahitana fitaovana fanaovana ny hosoka ary atontan-taratasy samihafa.
Nitrangana disadisam-piaraha-monina tao amin’ny Fokontany Fiherenantsoa, Kaominina Soanidrariny, Distrikan’Antsirabe faharoa ny alarobia 09 septambra 2020.
Ady lova no nipoiran’ny resaka, ary niafara tamin’ny fahafatesan’ankizivavy iray tokony ho 16 taona teo ho eo.
Olana teo amin’ny tovolahy iray sy ny renikeliny no niantombohan’ny resaka. Mifanolana matetika ireto olona ireto amina resaka lova.
Ny Alarobia tolakandro dia tonga tao amin’ny tranon’ny rainy ilay tovolahy hitady ilay renikeliny saingy tsy tao io fa ramatoa efa antitra iray no tao, ary io no norahonan’ilay tovolahy hovonoina ka niantso vonjy. Tamin’izay no tonga ilay renikeliny ary dia raikitra ny fifamaliana.
Tonga teny amin’ny biraon’ny Fokontany Antsongo-Antsirabe I ny Fokonolona ao an-toerana, androany Alakamisy 10 septambra tokony ho tamin’ny 9 ora maraina teo ho eo.
Manohitra ny famoahan’ny tompon’andraikitry ny Fokontany ny lisitr'ireo hisitraka « Vatsy Tsinjo » ny olona.
Tezitra ny maro fa tsy tao anatin’ny lisitra ny anaran’ireo izay tena hita fa sahirana, kanefa dia hitan’izy ireo tao anatin’ny lisitra ireo olona antsoin’ny eny an-tanana hoe “Debadeba” sy manan-katao, ary tsy azo heverina ho sahirana akory.
Raikitra ary ny tsoka kiririoka namoriana ny rehetra ary samy nijery ny anarany tao. Vao maika niakatra ny hatezeran’ny olona.
Milaza ny komity misahana io fakana anarana io fa samy noraisina avokoa ny anaran'ny mponina tokony hahazo, saingy teo imaso teo ihany dia nahazo horakoraka ary nambaran'ny mponina fa tsy marina izany.
jeudi, 10 septembre 2020 21:14
Fifidianana Loholona: « Teren-ko masaka » hoy ny KMF/CNOE
Madiva hifarana ny fotoam-piasan’ny Antenimierandoholona. Aoka tsy hirotorotoana ny fanatanterahana ny fifidianana Loholona, hoy ny KMF/CNOE satria volana mey 2021 vao tena hiditra hiasa ireo Parlemantera vaovao.
Solontenan’ny Vondrombahoakam-paritra itsinjaram-pahefana no ho fidiana ka ho fanarahana ny fenitra ara-demokratika dia takiana amin’ireo mpisehatra, hoy ny fanambarana nataony ny famoahana ny valin’ireo fitoriana tamin’ny fifidianana kaominaly farany teo, satria efa mihoatra loatra ny « fe-potoana » voalazan’ny lalàna.
Takian’ny KMF/CNOE ihany koa ny fanatanterahana ireo fifidianana tokony haverina sy ireo izay tsy mbola nahavita fifidianana mihitsy mba hahafahan’ireo Kaominina ireo hisitraka ny zony avy, ahafahany hifidy.
Mitaky ny hivoahan'ny « contrat » sy ny « décision » ireo mpianatra nivoaka tao amin’ny ENS (Ecole Normale Supérieure) mba tsy ho ny olona niofana ho an'ny fanabeazana indray no hatao ambanin-javatra.
Nisy lisitr'ireo mpianatra ENS voaray ho mpiasam-panjakana nivoaka tamin'ny Janoary 2020. Nampanantena ny minisitra tamin'izany fa Aprily 2020 no mivoaka ny « contrat » sy ny « décision » ho an'ireo mpianatra miisa 627 tafiditra tao anaty lisitra.
Valo volana aty aoriana anefa tsy mbola ahitana mangirana ny fanatanterahana an’io.